Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - U -Diritaanka
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Oktoobar 5, 2021
Qaanuunkaan asturnaanta (“Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah”) wuxuu quseeyaa websaytyada 100Kin10, mashruuc maaliyadeed oo ay maalgelisay Xarunta Tides, shirkad faaiido dadweyne oo California ah (“annaga,” “annaga,” “annaga”), oo ku yaal https:/ /100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org, iyo https://www.starfishinstitute.org (“Shabakadaha”).
Asturnaantaadu waa noo muhiim. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharraxayaa macluumaadka laga yaabo inaan kaa soo ururinno ama aad bixin karto markaad booqato Shabakadaha Internetka iyo hab -dhaqankayada ururinta, isticmaalka, ilaalinta, ilaalinta, iyo shaacinta macluumaadka. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu quseeyaa macluumaadka a) laga yaabaa inaad si ikhtiyaar ah noo siiso markaad booqato Shabakadaha Internetka; b) waxaa laga yaabaa inaan si toos ah u ururinno markaad booqato Shabakadaha Internetka; iyo c) oo laga yaabo inaan ka soo ururinno dhinac saddexaad iyo ilo kale.
Fadlan akhri siyaasaddan Qarsoodiga ka hor inta aanad isticmaalin shabakadaha. Markaad booqato Website-ka ama aad macluumaadka nagu siisid Websaydhka, waxaad ogolaatay shuruudaha Siyaasaddan Khaaska ah iyo sidoo kale annaga Shuruudaha iyo Xaaladaha Isticmaalka. Si kale haddii loo dhigo, haddii aadan ku raacsanayn Siyaasaddan Khaaska ah, waa inaadan isticmaalin shabakadaha.
Looma baahna inaad bixiso wax macluumaad shakhsi ah si aad u booqato Shabakadaha Internetka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaan xog ka uruurinno oo ku saabsan booqdayaasha Shabakadaha Internetka. Macluumaadkani wuxuu kuu aqoonsan karaa adiga shakhsi ahaan sida magaca, cinwaanka iimaylka lambarka taleefanka, cinwaanka boostada, tirada dadka, iyo macluumaad kale oo la mid ah (“Macluumaadka Shakhsiyeed”). Waxaan u aruurineynaa Macluumaadka Shakhsiyeed iyo macluumaadka kale laba siyaabood: 1) inaad si ikhtiyaar ah noo siiso; iyo 2) si otomaatig ah markaad booqato Shabakadeena.
Macluumaadka Aad Na Siiso: Waxaad dooran kartaa inaad noo soo gudbiso Macluumaadkaaga Shakhsiyeed sababo kala duwan awgood. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah: iska qorista wargeysyada emaylka annaga; is -qoritaanka si aad u hesho macluumaad ku saabsan shaqadeena, barnaamijyada, dadaallada, ama dhacdooyinka; buuxinta “Nala soo xiriir” ama foom kale oo on-line ah si aad u weydiiso su’aal ama aad u codsato macluumaad; nagala soo xiriir email ahaan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad cusboonaysiiso ama tirtirto macluumaadka aad na siisay, fadlan la xiriir info@tides.org iyo info@100Kin10.org.
Macluumaadka Si Toos Ah Loo Ururiyey: Qeybtaan macluumaadka waxaa ku jira Protocol -ka Internetka (“IP”) cinwaanka kombiyuutarka ama aaladda aad u isticmaasho gelitaanka Shabakadaha; cinwaanka internetka ee goobta aad ka xiriirisay Shabakadaha; iyo xiriiriyeyaasha aad raacdo Website -yada.
Kukiyada iyo Farsamooyinka la midka ah: “Macluumaadka Si Toos ah Loo Uruuriyay ”waxaa kale oo ka mid ah macluumaadka lagu soo ururiyey buskudyada biraawsarka ama teknolojiyada kale ee raadraaca. Kukiyada waa faylal xog yar oo lagu dhejiyo kombiyuutarkaaga markaad booqato goob. Kukiyada waxay u adeegaan ujeedooyin kala duwan, sida inay naga caawiyaan inaan fahanno sida bartayada loo adeegsado, waxay kuu oggolaanaysaa inaad dhex dhexaadiso bogagga si hufan, xusuusta dookhyadaada, iyo guud ahaan hagaajinta khibradaada daalacashada. Kukiyada maahan habka kaliya ee lagula socdo booqdayaasha websaydh. Waxa kale oo laga yaabaa inaan u isticmaalno faylal garaafyo yaryar ah oo leh aqoonsiyo u gaar ah oo la yiraahdo beon (iyo sidoo kale "pixels" ama "gifs cad") si loo aqoonsado marka qof booqdo goobahayaga.Markaad dhaqaajiso goobta ku habboon biraawsarkeena, waxaad dooran kartaa inaadan aqbalin cookies. Si kastaba ha ahaatee, fadlan ogow haddii aad doorato, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad gasho qaybo ka mid ah Shabakadaha. Haddii aad isticmaasho goob biraawsarka oo kuu oggolaanaysa inaad aqbasho cookies, waxaad oggolaatay adeegsiga kukiyada. Sidoo kale, ogow in qaar ka mid ah teknolojiyada raadraaca kukiyada aan badiyaa ay ku tiirsan yihiin kukiyada si ay si habboon u shaqeeyaan, sidaa darteed curyaaminta cookies-ku waxay wax u dhimi kartaa shaqadooda. Qaar ka mid ah daalacashada Internetka ayaa laga yaabaa in loo habeeyo inay u diraan calaamadaha "Ha Raacin" adeegyada internetka ee aad booqato. Hadda kama jawaabno "Ha Raacin" ama calaamadaha la midka ah. Si aad wax badan uga ogaato "Ha Raacin," fadlan booqo http://www.allaboutdnt.com.
Macluumaadka aan ka helno kuwa kale: We waxaa laga yaabaa inuu ka helo Macluumaad Shakhsiyeed adiga kugu saabsan ilo kale, oo ay ku jiraan ururkaaga ama shirkaddaada, kuwa kale oo u malaynaya inaad xiisaynayso shaqadayada, ilaha guud ee la heli karo, iyo bixiyeyaasha falanqaynta dhinac saddexaad. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaan helno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed haddii qof ka tirsan ururkaaga uu kuu magacaabo qof la xiriira ururkaas.
Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadka aan aruurineyno inaan sameyno waxyaabaha soo socda:
Kula soo xiriir, oo ay ku jirto ka jawaabidda su'aalahaaga iyo codsiyadaada.
Hawlgeli, ilaali, maamul, oo hagaaji Shabakadaha.
Samee cilmi -baaris iyo falanqayn ku saabsan isticmaalayaasha Shabakadaha iyo qaababka adeegsiga.
Kaala soo xiriir wixii ku saabsan isbeddelada Shabakadaha ama Siyaasadda Qarsoodiga, haddii nalaga rabo inaan sidaas yeelno.
Ka samee xog isku -darka iyo kuwa kale oo qarsoodi ah macluumaadka adeegsadeyaasha laakiin aan ku xirnayn Macluumaadka Shakhsiyeed, oo aan la wadaagi karno dhinacyada saddexaad ujeeddooyin ganacsi oo xalaal ah.
Ilaali Shabakadaha Internetka, oo ay ku jirto in la ogaado, la baaro, lagana hortago waxqabadyada ku xadgudbi kara siyaasadahayada ama sharcigayaga.
U hoggaansan sharciga. Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed sida aan u rumaysan nahay inay habboon tahay (a) in loo hoggaansamo sharciyada khuseeya, codsiyada sharciga ah iyo hannaanka sharciga, sida in laga jawaabo wicitaannada maxkamadda ama codsiyada mas'uuliyiinta dawladda; iyo (b) halka sharcigu oggol yahay oo la xiriirta baaritaan sharci.
Hel oggolaanshahaaga. Xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaan ku weydiino oggolaanshahaaga si aan u aruurino, u isticmaalno ama u wadaagno Macluumaadkaaga Shakhsi hab aan ku jirin Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Xaaladaha noocaas ah, waxaan kaa codsan lahayn inaad “doorto” adeegsigaas.
Siyaabaha aan u Wadaagno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed
Waxaa laga yaabaa inaan u siino Macluumaadkaaga Shaqsi hay'adaha la xiriira sida Tides Foundation ama Shabakadda Tides ama bixiyeyaasha adeegga dhinac saddexaad ee aan ku howlannahay si ay nooga caawiyaan inaan ku shaqeyno Shabakadaha Internetka oo aan ku maamulno waxqabadyada annaga na matalaya. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah martigelinta Shabakadeena, xariirka ama madal kale, adeegyada farsamada macluumaadka, iyo maareynta xogta. Haddii adeeg-bixiyayaashan dhinac saddexaad ay heli karaan Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, waxaa looga baahan yahay inay ilaaliyaan qarsoodinimada macluumaadka oo ay u adeegsadaan ujeeddo xaddidan oo loo bixiyay.
Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno ama shaaca uga qaadno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed sida aan u aragno inay lagama maarmaan u yihiin sharciyada quseeya; si ay uga jawaabaan codsiyada ka imanaya dadweynaha, dawladda, iyo hay'adaha sharciyeynta; in loo hoggaansamo awaamiirta maxkamadda, hababka dacwadaha, iyo hababka kale, si loo helo daawayn sharci ama la xaddido waxyeelladayada; iyo si loo ilaaliyo xuquuqda, badbaadada, ama hantida shaqaalahayaga, adiga ama kuwa kale.
Waxaan ku wareejin karnaa ama si kale u wadaagi karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ee la xiriira isku -biirinta, iibsiga, ama macaamil ganacsi kale ama wareejinta hantida, iyada oo la raacayo shuruudaha qarsoodinimo ee habboon, iyo ogeysiiska adiga haddii sharcigu u baahan yahay.
Nabadgelyada Macluumaadkaaga Shakhsi ayaa muhiim noo ah. Waxaan qaadnaa dhowr tallaabo oo abaabul, farsamo iyo mid jireed oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo Macluumaadka Shakhsiyeed ee aan aruurinno. Si kastaba ha ahaatee, khatarta ammaanku waxay ku jirtaa dhammaan intarneedka iyo teknolojiyada macluumaadka, mana dammaanad qaadi karno amniga buuxa ee Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Waxaan u hoggaansami doonnaa sharciyada iyo qawaaniinta quseeya ee u baahan inaan ku ogeysiino haddii ay dhacdo in Macluumaadkaaga Shakhsiyeed la waxyeeleeyo iyada oo ay sabab u tahay jebinta tallaabooyinkeenna amniga.
Waxaan haynnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed illaa iyo inta ay lagama maarmaan tahay si aan u fulino danahayaga si waafaqsan Siyaasadda Qarsoodinimada, xeerarkeenna haynta, iyo sharciga lagu dabaqi karo.
Macluumaadkaaga iyo ku-habboonaantaada, Websaydhadaan waxaa laga yaabaa inay ku jiraan xiriirro goobo-dhinac saddexaad. Websaytyadaan cid saddexaad ma hoos yimaadaan annaga oo waxaa maamula siyaasadaha u gaarka ah iyo shuruudaha isticmaalka. Intaa waxaa dheer, isku-xirnaanta dhinac saddexaad ma soo jeedinayaan ku-xirnaan, oggolaansho ama kafaala-qaad annaga mid kasta oo ka mid ah goobta ku xiran.
U hoggaansanaanta Xeerka Ilaalinta Qarsoodinimada onlaynka ee Carruurta
Ilaalinta asturnaanta carruurta aan qaangaarin ayaa si gaar ah muhiim u ah. Sababtaas awgeed, annagu si ulakac ah uma ururinno macluumaadka Shabakadaha kuwa aan ognahay inay ka yar yihiin 16. Dheeraad ah, qayb ka mid ah Shabakadaha ma aha kuwo si gaar ah loogu habeeyay inay soo jiitaan qof kasta oo ka yar 16 sano. isla markiiba tirtiri doonaa macluumaadka.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan bogag ku yaal Mareegahayaga oo, sababta oo ah dabeecadda madasha iyo kartida Websaydhadeena, ay ku jirto digniinta ah in xogta la galay ay tahay "xog dadweyne." Macluumaadka noocan oo kale ah waxaa loola dhaqmaa si ka duwan ujeeddooyinka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah sida macluumaadka kale ee halkan lagu sharraxay. Markaan isticmaalno weedha macluumaadka dadweynaha, waxaan ula jeednaa in macluumaadka laga yaabo in si guud loo arki karo ama laga saari karo Mareegahayada.
Markaad geliso macluumaadkaaga qaybo ka mid ah Shabakadahayaga oo ka digaya in macluumaadka la galay ay noqon doonaan xog dadweyne, waxaad qiraysaa inaanan dammaanad ka qaadayn in macluumaadka noocan ahi uu ahaan doono mid gaar ah; Intaa waxaa sii dheer, waxaad qiraysaa inaannaan mas'uul ka ahayn wax kasta oo shaaca ka qaadista macluumaadka shaqsiyeed iyo wixii carqalado sharci ah ee arrintaas la xiriira. Runtii, sababta oo ah ma dammaanad qaadayno in macluumaadka noocaas ahi uu ahaan doono mid gaar ah, waa inaad filaysaa in qof kasta, oo ay ku jiraan dad ka tirsan Shabakadeena, uu awoodi doono inuu arko.
Xuquuqda Asturnaanta Kaliforniya
Haddii aad ku nooshahay Kaliforniya oo aad na siisay macluumaad shaqsi ahaan lagu garan karo, waxaad codsan kartaa macluumaad hal mar sanadkiiba taariikhda ku saabsan bixintayada qaybaha qaarkood ee macluumaadkaaga shaqsi ahaan lagu garan karo dhinacyada saddexaad ujeeddooyinkooda suuqgeynta tooska ah. Codsiyada noocaas ah waa in loo soo gudbiyaa Tides at info@tides.org.
Macluumaadka Isticmaalayaasha Ka baxsan Maraykanka
Shabakadahaan waxaa lagu daabacay Mareykanka waxayna ku hoosjiraan sharciyada Mareykanka. Haddii aad tahay degane ama muwaadin EU ah, waxaad leedahay xuquuq dheeri ah oo la xiriirta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed iyadoo la raacayo Xeerka Ilaalinta Xogta Guud (“GDPR”), oo ay ku jirto xaqa aad ku codsan karto nuqul ka mid ah Macluumaadkaaga Shakhsiyeed oo aan yeelan karno, iyo xaq u leedahay inaad codsato inaan cusboonaysiino, tirtirno ama qarino macluumaadkaas. Haddii aad qabtid wax su'aalo ama codsi GDPR ah, fadlan kala xiriir Tides at GDPR@tides.org.
Waxaa laga yaabaa inaan dib u eegno Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti kasta. Markaan sidaas yeelno, waxaan beddeli doonnaa taariikhda “Cusboonaysiintii Ugu Dambeysay” oo ku taal dusha boggan. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad si joogto ah dib u hubiso si aad ula socoto wixii isbeddel ah ee ku yimaad Siyaasadda Qarsoodiga. Isticmaalkaaga sii socda ee Shabakadaha Internetka ka dib markaan dhejinno isbeddellada macnaheedu waa inaad oggolaatay isbeddeladaas.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama faallooyin ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ama wax kasta oo la xiriira Shabakadaha, fadlan kala xiriir Tides info@tides.org. Su'aalaha GDPR-ga gaarka ah iyo codsiyada ayaa sida ugu wanaagsan loo maraa GDPR@tides.org.